Waa hubaal in 10kaan sawir ee quruxleyda Disha Patani kaa yaabi doonan………. | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Waa hubaal in 10kaan sawir ee quruxleyda Disha Patani kaa yaabi doonan……….
Waa hubaal in 10kaan sawir ee quruxleyda Disha Patani kaa yaabi doonan……….
Bulsha:- Ugu horeyn maanta waa dhalashada xidigada aan mawduuca kusoo xusnay ee quruxda lagu manaystay waxaanan F4U ahaan si kal iyo laab ugu hambalyeynaa Disha dhalashadeeda, intaas kadib waxaan maanta doonayna inaan idinla wadaagno 10ka sawir oo aan is niri waxay dhamaan taageeraheeda tusi doonan quruxda dhabta ee xidigadan 25sani jirka ah waxaana hubaal in ay sawiradi kaafajicin doonan kugu kalifi doonan inaad aman kal iyo laab ah kula dhacdo Disha.
Qofba meel ayuu ka arkaa quruxda qofka balse celcelis badan oo aan sameyn waxaan idiin soo xulnay kuwa inta badan taageeraheedu ugu jecel yihiin waxanan filaynaa inaad ka heshaan.